GRIM TALLY Britain ayaa hadda leh tirada ugu badan ee loo dhinto adduunka iyadoo la dilo 935 qof maalintii, daraasad ayaa heshay
Boqortooyada Midowday (UK) ayaa hadda leh tirada ugu badan ee dhimashada ka timaadda cudurka loo yaqaan 'coronavirus' adduunka, sida lagu sheegay daraasad cusub. Britain waxay la wareegtay Czech Republic, oo aragtay inta badan Coviddeaths qofkiiba ilaa Janaayo 11, sida lagu sheegay xogtii ugu dambeysay. Ingiriiska ayaa leh heerka ugu sarreeya ee dhimashada Covid adduunka, iyadoo leh ...
Dr Hilary ee GMB ayaa soo saaray digniin adag oo ku saabsan caadooyinka dukaamada 'maxaad halista u qaadaysaa?'
Subax Wanaagsan Boqortooyada Ingiriiska Dr Hilary Jones ayaa uga digtay daawadayaasha inay ka taxadaraan dukaamada waaweyn oo ay xasuusnaadaan inaysan waligood alaabta soo qaadin ka dibna dib u dhigin. Dr Hilary wuxuu kala hadlayey martida loo yahay Piers Morgan iyo Susanna Reid bal inaan wali u baahanahay inaan ka taxaddarno suurtagalnimada fiditaanka ...
Dhawaan, saaxiibkeen warshaddeenna wuu guursaday, dhammaan asxaabteena warshaddeenuna way ku farxeen iyaga
Dhawaan, saaxiibkeen warshaddeenna wuu guursaday, dhammaan asxaabteena warshaddeenuna way ku farxeen iyaga. Warshaddeena kaliya ma aysan ansixin fasaxa arooskooda, laakiin waxay kaloo abaabushay xaflad dabaaldeg gaar ah, si loogu duceeyo weligood iyo weligood. Warshaddeenu waxay muhiimad weyn siineysaa xuquuqda aadanaha iyo ...
Bishan waxaan u dhoofinay alaabada 3 * 40 fuudh oo cube sare ah Yurub, Koonfurta Ameerika, iyo USA, bacaha baakadaha lagu xirxirayo iyo bacaha wax lagu iibiyo ee bacrimi kara
Bishan waxaan u dhoofinay alaabada 3 * 40 fuudh oo cube sare ah Yurub, Koonfurta Ameerika, iyo USA, bacaha baakadaha lagu rito ee caaga ah iyo bacaha wax lagu gado ee bacrimi kara. Waxaan markhaati ka nahay xiisaha sii kordhaya ee yareynta isticmaalka caagagga dhaqameed, labadaba macaamiisha iyo, gaar ahaan, siyaasiyiinta sidoo kale. Dhowr ...
Warshaddeenu waxay soo bandhigtay qayb ka mid ah mashiinno iyo qalab cusub bishii Diseembar 2020
Warshadeenu waxay soo bandhigtay qayb ka mid ah mashiino iyo qalab cusub bishii Diseembar 2020, oo ay ku jiraan 2 * mashiinada afuufa filimka, 1 mishiin daabacan iyo 3 mashiinno samaynta boorso. Maaddaama ay tahay warshad horseed u ah warshadaha bacda baaba'aya, amarradu way sii kordhayeen, iyo Si loo daboolo baahiyaha macaamiisha, sidaas .. injineer ...